Ogaden News Agency (ONA) – Golaha Wasiirada Itoobiya oo Wax Laga Badalayo.
Golaha Wasiirada Itoobiya oo Wax Laga Badalayo.
Xukuumada cusub ee Itoobiya ayaa lasheegayaa in ay kutala jirto sidii loodhimi lahaa wasaaradaha badan ee xukuumadu ay kakooban tahay, kuwaas oo culays badan oo dhinaca dhaqaalaha ah iyo waliba baahsanaan kukeentay xukuumada Abiye Axmed.
Golaha wasiirada iyo wasiirudowlayaasha ayaa lagu sheegay in ay yihiin 28 wasaaradood kuwaas oo soo kordhiyay culays dhaqaale iyo waliba baahsanaan dhinaca maamulka ah, wuxuuna Abiye Axmed kutala jiraa sidii uu aad ugu dhimi lahaa wasaaradaha tirada badan ee aan tayada lahayn.
War kasoo baxay xafiiska Raysal-wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed ayaa lagu sheegay in siwayn loodhimi doono golaha Wasiirada ee xukuumada Itoobiya, kuwaas oo laga dhigi doono 16 wasaaradood oo kaliya taas oo kadhigan gole wasiiro oo kooban marka loo eego kuwii hore.
Hadalkakasoo baxay xafiiska Raysal-wasaaraha ayaa lagu sheegay in baarlamaanka laga ansixin doono howshan kadib markii fasaxa laga soolaabto, waxaana lasheegay in dhinaca raysal-wasaaraha laga soo dhameeyay qorshahan.
Xukuumadaha Itoobiya soomara ayaa caan ku ah habacsanaan iyo musuqmaasuq dhinaca wasiirada ah, waxaana lasheegaan in talada wadanka ay hadba koox yari kacanta kuhayso halka wasiirada kalana ay hanti badan lunsadaan.